December (1) November (4) October (8) September (5) August (10) July (10) June (6) May (10) April (19) March (13) February (11) January (12) Arrimaha Bulshada Hargeysa: Kaalinta isbitaalka haweenka ee Cigaal (Wareysi) Waxaan wareysi la yeelannay umuliso sare Khadra Cali Cigaal, oo ah aasaasaha iyo madaxa xarunta caafimaadka Cigaal ee magaalada Hargeysa, oo ah xarun haweenka loogu talagalay. Waxaan marka hore wey...
31 JUL 2013 Akhri
Kufsiga oo hoos u dhacay Puntland Kufsiga haweenka ayaa hoos u dhacay deegaannada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee sanadkan sida ay sheegtay Wasaarada Arrimaha haweenka Puntland. Agaasimaha Waaxda Shaqaaqooyinka ee Was...
29 JUL 2013 Akhri
Tacadiyo ay ka cabanayaan xoogsatada gaarigacanleyda Dadka danyarta ah ee xamalka ka shaqeysta gaar ahaan kuwa ku xamaasha gaarigacannada ayaa kala kulma dhibaatooyin dadka ay shaqooyinka u qabtaan, taas oo xadgudub ku ah xaquuqdooda shaqo maadaama a...
26 JUL 2013 Akhri
Madbacad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo Ganacsato Soomaaliyeed ayaa madbacad cusub oo loogu magac daray Kismaayojet ka hirgeliyay magaalada Kismaayo, iyadoo dadka ku nool gobollada Jubbooyinka u qaban doonta adeegyada ay u baahan yihiin,...
24 JUL 2013 Akhri
Maxaa ka mid ah dhaqanka miyiga Soomaalida? Soomaalidu waxay leeyihiin dhaqan ilaaliya jiritaanka Soomaalinimada in kasatoo aad arkayso xaalado beddalaya dhaqanka reer miyiga iyo kan magalada oo aan hore loo aqoon.
Inkasatoo is beddel&nb...
Weriyayaasha oo diiday xeer cusub Weriyayaasha Soomaaliyeed ayaa ka gadooday xeer warfaafineed cusub oo golaha wasiirrada ay ansixiyeen toddobaadkii hore. Xeerka cusub oo baarlamaanka la horgeyn doono bisha Sebtember ayaa dowladda ...
19 JUL 2013 Akhri
Degmada Ceelwaaq oo laga dhisayo garoon diyaaradeed Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa markii ugu horreysay yeelaneysay garoon diyaaradaha ah, kaasoo laga dhisayo meel qiyaastii ilaa 2 km u jirta degmada, waxaana adeegsan doona diyaaradaha ...
18 JUL 2013 Akhri
Joojinta qaadka ee dalka Ingiriiska maxay uga dhigan tahay Soomaalida dalkaas ku nool? Abuukar: Jidkan ma fududeyn, in badan ayay nagu qaadatay inaan dowladda Ingiriiska ka dhaadhicinno joojinta qaadka. (Wareysi)
Dowladda Britain ayaa toddobaadkii hore dalkeeda ka mamnuucday cunist...
12 JUL 2013 Akhri
05 JUL 2013 Akhri
Dhibaatada guurka gabdhaha da`da yar: Sheekada murugada leh ee Shukri Axmed Caalin Gabdhaha da'doodu yartahay ee la guursado waqti aysan diyaar u ahayn inay qoys maamulaan ayaa waxaa ka yimaada dhibaatooyin mararka qaarkood mahadho reeba, kuwaasi oo la soo gudboonada nolosha g...
04 JUL 2013 Akhri